शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा फारम अनलाइनबाट - Nayapul Online
काठमाण्डौँ – शिक्षक सेवा आयोगले अबदेखि शिक्षकको स्थायी परीक्षाको आवेदन फारम अनलाइनमार्फत भर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. तुलसी थपलियाले शिक्षाका कार्यालयमै आएर फारम भर्दा बढी झन्झट र समस्या आउन थालेपछि अनलाइन प्रणालीको सुरुआत गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले ट्रायलका रुपमा अब आउने परीक्षामा यो व्यवस्था गर्न लागेको हो । स्थायी शिक्षकको आवेदनसँगै शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षाको समेत अनलाइन फाराम भर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष ताना शर्माले आयोगलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइनमार्फत आवेदन फाराम भर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । यसले गर्दा उम्मेदवारका लागि बढी खर्चिलो र आवेदन फाराम व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदै आएको छ । अनलाइनबाट आवेदन दिन पाउने व्यवस्था भएपछि उम्मेदवारले घरमै बसेर आवेदन दिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । घरबाट आवेदन फाराम भरे पनि आवेदन दस्तुर बुझाउन तोकिएको बैंकमा जानैपर्ने हुन्छ, अनलाइनमार्फत फारम भर्ने व्यवस्था गरेपछि परीक्षा समेत थप व्यवस्थित हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै आयोगले स्थायी पदका लागि आवेदन दिएको उम्मेदवारको प्रारम्भिक परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘शिक्षक पदका लागि उम्मेदवारहरुको संख्या धेरै हुन थालेपछि प्रारम्भिक परीक्षाबाट परीक्षार्थी छनोट गरी परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. थपलियाले प्रारम्भिक परीक्षाबाट छनोट भएपछि मात्रै स्थायी पदका लागि लिइने लिखित परीक्षामा सहभागी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
हिरो महिला गोल्डकप फुटबल: नेपालले इरानलाई पराजित, फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो